Wexcoin စျေး - အွန်လိုင်း WEX ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Wexcoin (WEX)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Wexcoin (WEX) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Wexcoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
WEX – Wexcoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Wexcoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Wexcoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
WexcoinWEX သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0479WexcoinWEX သို့ ယူရိုEUR€0.0404WexcoinWEX သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0365WexcoinWEX သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0435WexcoinWEX သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.429WexcoinWEX သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.301WexcoinWEX သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč1.05WexcoinWEX သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.178WexcoinWEX သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0636WexcoinWEX သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0666WexcoinWEX သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$1.07WexcoinWEX သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.371WexcoinWEX သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.254WexcoinWEX သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹3.59WexcoinWEX သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.8.05WexcoinWEX သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0656WexcoinWEX သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0721WexcoinWEX သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿1.49WexcoinWEX သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.332WexcoinWEX သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥5.06WexcoinWEX သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩56.78WexcoinWEX သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦18.51WexcoinWEX သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽3.49WexcoinWEX သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴1.32
WexcoinWEX သို့ BitcoinBTC0.000004 WexcoinWEX သို့ EthereumETH0.00012 WexcoinWEX သို့ LitecoinLTC0.000807 WexcoinWEX သို့ DigitalCashDASH0.000522 WexcoinWEX သို့ MoneroXMR0.000535 WexcoinWEX သို့ NxtNXT3.83 WexcoinWEX သို့ Ethereum ClassicETC0.00652 WexcoinWEX သို့ DogecoinDOGE13.66 WexcoinWEX သို့ ZCashZEC0.000507 WexcoinWEX သို့ BitsharesBTS1.83 WexcoinWEX သို့ DigiByteDGB1.85 WexcoinWEX သို့ RippleXRP0.156 WexcoinWEX သို့ BitcoinDarkBTCD0.00163 WexcoinWEX သို့ PeerCoinPPC0.162 WexcoinWEX သို့ CraigsCoinCRAIG21.56 WexcoinWEX သို့ BitstakeXBS2.02 WexcoinWEX သို့ PayCoinXPY0.826 WexcoinWEX သို့ ProsperCoinPRC5.94 WexcoinWEX သို့ YbCoinYBC0.00003 WexcoinWEX သို့ DarkKushDANK15.17 WexcoinWEX သို့ GiveCoinGIVE102.42 WexcoinWEX သို့ KoboCoinKOBO10.38 WexcoinWEX သို့ DarkTokenDT0.0441 WexcoinWEX သို့ CETUS CoinCETI136.56
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 19:30:02 +0000.